Arsene Wenger oo kahadlay damaca Chelsea ee Alexis Sanchez | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Arsene Wenger oo kahadlay damaca Chelsea ee Alexis Sanchez
Tababaraha Arsenal, Arsene Wenger ayaa si adag uga hadlay warar isku xidhiidhiyay Chelsea iyo laacibka Gunners ee Alexis Sanchez, kuwaas oo tibaaxay in uu wiilka reer Chile doonayo inuu u wareego koox kale oo ka dhisan magaalada London, taas oo ah Chelsea.
28 jirkan ayaa sida uu qoray wargeyska The Guardian, waxa uu sheegay inuu doonnayo inuu u wareego koox kale oo London ka dhisan laakiin ay ku jirto maskax doonaysa inay koobab ku guuleysato. Arrintan ayaa waxa si degdeg ah uga jawaabay tababare Arsene Wenger oo caddeeyey in aanay dhici karin in koox kale oo reer London ah uu u ciyaaro.
“Magaalada London hal koox oo kaliya ayuu uga ciyaarayaa” sidaas ayuu yidhi Wenger.
Wenger oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku faaqidayo ciyaarta Manchester City ee Sabtida, waxa kale oo uu yidhi: “Waxay ila tahay in Sanchez uu kooxdan ku faraxsan yahay.”
Caqabadda ugu weyn, waxay tahay in uu heshiiskiisu dhamaanayo sannad kaddib, waxaana Wenger oo ka hadlaya arrintaasi uu yidhi: “Heshiiskiisa maanaan kordhin wali laakiin waxaan rajaynayaa inuu kooxda sii joogi doono.”
Tiro ciyaartooyada ugu wanaagsan ee Arsenal ah ayaa sannadihii u dambeeyey uga wareegay kooxaha ay xafiiltamaan ee ay isku hirdiyaan Premier League, hase yeeshee waxa uu Wenger caddeeyey in aanu Sanchez u ciyaari doonin koox kale oo reer London ah oo aan laga iibin doonin haddii uu fashilmo heshiis kordhinta la wado.
“Runta ayaan idiin sheegayaa, hore ayay dhacday wakhtigii aanu ku jirnay mushkiladda dhaqaale xumada oo aanu ciyaartoygayagii ugu fiicnaa u iibinay, laakiin arrintaasi way dhamaatay.” ayuu mar kale yidhi tababare Wenger.
Sanchez oo afka hore uga ciyaara xulka qaranka Chile ayaa waxa heshiiskiisa Arsenal ka hadhay 15 bilood oo kaliya.